Tuesday October 22, 2019 - 20:11:55 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Dowladda Itoobiya ayaa Masar uga digtay in ay isku daydo weerar melleteri oo ka dhan ah biya xireenka Al Nahda ee laga dhisayo halka uu kasoo askumo wabiga Al Niil.
Abiy Axmed oo ah R/wasaaraha dowladda Xabashida Itoobiya ayaa markii ugu horraysay si kulul uga hadlay khilaafka kala dhaxeeya Masar ee ku saabsan qeybsiga biyaha Wabiga Niil.
isagoo ka hor hadlayay xildhibaannada baarlamaanka Itoobiya ayuu ka jawaabay su'aalo laga weydiiyay halka uu marayo dhismaha biya xireenka Al Nahda, wuxuu sheegay in dhismaha biya xireenkan uu yahay mashruuc qaran oo ladoonayo in lagu yareeyo Faqriga halakeeyay shacabka Itoobiya.
"Haddii uu dagaal lagama maarmaan noqdo waxaan awoodnaa in aan diyaarinno malaayiin ciidamadeenna ah balse taasi maslaxadeenu kuma jirto" ayuu yiri Abiy Axmed.
R/wasaaraha Itoobiya ayaa adkeeyay in dowladdiisa ay ka go'antahay meel marinta dhismaha biya xireenka isagoo meesha ka saaray shakiga laga qabo in nuqsaan uu ku yimaad biyaha wabiga Niil ee u gudba Masar iyo Suudaan.
Horraantii bishaan waxaa fashilmay wadahadalladii sedax geesoodka ahaa ee udhaxeeyay Suudaan,Itoobiya iyo Masar waxaana la saadaalinayay in xukuumadda Al Qaahira ay awood melleteri u adeegsanayso fashilinta Biyaha xireenka Al Nahda.
Haddii Itoobiya ku guulaysato dhismaha biya xireenkan wuxuu noqon doonaa midka koowaad ee ugu weyn qaaradda Afrika iyo midka 2aad ee ugu weyn caalamka waxayna Itoobiya korontadeeda u iibgeyn doontaa inta badan wadamada qaaradda Afrika.